Imibulelo emitsha yoMbulelo woMbulelo weRecipes eziqholwe ukusuka kwinqaba emhlophe
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Cofa apha ukuba le ngxelo yakho! » Imibulelo emitsha yoMbulelo woMbulelo weRecipes eziqholwe ukusuka kwinqaba emhlophe
Inqaba emhlophe inika i-Thanksgiving kulo nyaka ngeeresiphi ezimbini zokuhlohla ezintsha, enye ityhilwe ngokukhethekileyo kwi-OnlyFans. I-Bacon Jalapeño Cheese Slider Slider Stuffing kunye ne-Southwest Jalapeño Cheese Slider Stuffing, iinguqu zamva nje kwiresiphi ye-White Castle yokugxumeka yoqobo, ngokuqinisekileyo iya kongeza ubushushu kuyo nayiphi na itafile yesidlo sangokuhlwa. Lo Mbulelo uphawula isikhumbuzo seminyaka engama-30 yokukhutshwa kweresiphi yokuqala yokugxumeka ngo-1991.
Njengoko amagama abo esitsho, zombini iinguqulelo zokugalela zisebenzisa i-White Castle's enesiqholo se-Jalapeño Cheese Slider njengesithako esiphambili.
“Ixesha leholide sele liza kutshisa kakhulu kuba ezi ndlela zokupheka zipakisha ubushushu,” utshilo uJamie Richardson, usekela mongameli eWhite Castle. "Isilayidi sethu se-Jalapeño Cheese Slider yinto ethandwa kakhulu kuzo zombini iindawo zokutyela kunye nakwiipaseji zegrosari, ke siyazi ukuba iiCravers zethu ziya kuzithanda ezi ndlela zokupheka zishushu neziqholiweyo."
I-White Castle idibene nomcimi-mlilo osekelwe eFlorida kunye nompheki ukunceda ukufumana ilizwi malunga neendlela ezintsha zokupheka. UManny Washington Jr., umphathi wesithili kwiSebe lezoMlilo laseOrlando kunye nomntu odumileyo weendaba zoluntu, uya kubonisa abalandeli indlela yokwenza i-Bacon Jalapeño Cheese Slider Stuffing, equka amaqhekeza ebhekoni e-crispy, i-pepper ye-jalapeno edayiweyo, i-celery, i-cilantro, i-cumin kunye ne-shredded. ipepile jack samasi, bonke beza kunye ukudala enye-of-a-uhlobo incasa eshushu-kunye-eziqholiweyo. Umxholo wakhe uya kuvela kwijelo leYouTube leWhite Castle kunye neakhawunti yakhe yeFacebook, Twitter kunye ne-Instagram.
Kwaye ibonisa icala layo elinesiqholo, i-White Castle yazisa isilayidi setshizi esishushu kunye nesinongo kuMazantsi-ntshona e-Jalapeño Cheese Stuffing kuphela kwi-OnlyFans, iqonga lonxibelelwano elisekelwe kumrhumo elinabasebenzisi ababhalisiweyo abangaphezu kwe-180 yezigidi kunye nabadali abangaphezu kwezigidi ezi-2 kwihlabathi jikelele. Le nguqulo ithatha ubushushu ukuya kwinqanaba elilandelayo ngokongeza i-jalapeño eyongezelelweyo kunye nepepile ye-poblano ngelixa ibalaselisa i-flavour yendabuko eyaziwayo kunye neyothando. Abalandeli be-White Castle banokujonga iresiphi ekhethekileyo kwiprofayile entsha ye-OnlyFans.
“Eyona nto intle ngeBacon kunye neenguqulelo zaseMazantsi-ntshona zeJalapeño Cheese Slider Stuffing kukuba ungayenza enye ibe shushu kwaye ibe nesiqholo ngendlela othanda ngayo,” utshilo uRichardson. "Ezi zimele zibe nazo izitya ezisecaleni zoMbulelo kunye nemibhiyozo yoMbulelo."
Njengokuncedisa kolu lutsha lushushu, iiresiphi zokuhlohla, iWhite Castle ibambe intengiso yomlilo kuhlelo lwayo lokuzalwa olulinganiselwe lwe-100 "Cravey Boat." Ifumaneka kwi-White Castle's House of Crave kwivenkile yesipho ekwi-intanethi, iCravey Boat ifanelekile kwigravy, fondue, hollandaise kunye nezinye iisosi ezinqwenelekayo. Ifumaneka nge-$15 kuphela.
Ukongeza, iWhite Castle inika iCombo yeCastle #1-6 yasimahla okanye iBreakfast Combo yasimahla kubo bonke abacimi-mlilo abasebenza kuMbulelo. Akukho khuphoni okanye ukuthenga kuyimfuneko, nangona abacimi-mlilo becelwa ukuba babonise izazisi zabo kwaye bafike ngaphambi kwemini njengoko iindawo zokutyela ezininzi zivalwa kwangethuba ukulungiselela iholide.
Iiresiphi ezintsha ezilula kodwa ezimnandi zokuhlohla zifika kwisikhumbuzo seminyaka engama-30 yeresiphi ye-Original Slider® Stuffing. Iresiphi yaqala ngo-1991, xa ilungu leqela leWhite Castle laphucula iresiphi yosapho lukamakhulu walo ngengxowa yezilayidi. Ukusukela ngoko, i-Slider-based stuffing ethandwayo ayibanga sisiko loMbulelo nje kuphela, kodwa kwakhona yongezwa kwisidlo sangokuhlwa unyaka wonke kwiintsapho zaseCraver kulo lonke elase-US.
Ngo-2019, usapho luphethe ukutya okukhawulezayo kunye nenkampani epakishwe ngabathengi yazisa inguqulelo ehlaziywe kancinane yeresiphi yeSilayidi soMxholo weSilayidi sokuqala ukubhenela kwii-vegans kunye nemifuno. Isebenzisa i-Impossible™ Slider njengesona sithako siphambili, iWhite Castle Impossible™Slider Stuffing inike abo bangatyi nyama ithuba lokonwabela incasa ebekade eyidlavula ngumntu wonke.
I-White Castle Cravers inokuthenga i-Original Sliders kunye ne-Jalapeño Cheese Sliders kwicandelo lesikhenkcisi kwiivenkile zegrosari kwilizwe lonke. Izilayidi zoqobo, i-Jalapeño Cheese Sliders kunye ne-Impossible™ Sliders zinokuthengwa kwiindawo zokutyela eziMhlophe Castle. Iiresiphi zokugxumeka zinikwe ngezantsi. Ukufumana imibono yeresiphi ekhethekileyo usebenzisa izinto zemenyu ye-White Castle, tyelela www.whitecastle.com/food/recipes.
I-White Castle iyakhula iindidi zeeresiphi zokuxutywa ziya kubhenela kwiintlobo ezahlukeneyo zeCraver. Iiresiphi ezintathu zokugxumeka zidweliswe ngezantsi. Eyesine - neyona ishushu - iresiphi iyafumaneka ngoku kwi-White Castle's OnlyFansprofile.
Ixesha lokuzilungiselela: imizuzu eli-20
Ixesha lokupheka: 45 ukuya kwi-50 imizuzu
Iinkonzo: 4 ukuya ku-6
1. 12 I-White Castle® Jalapeño Cheese Sliders
2. Iipunipoli ezili-10 zebhotela
3. 1 ikomityi ye-celery, idayisi
4. I-pepper ye-jalapeno ye-1, inqunyulwe kakuhle
5. Izilayi ze-10 zebhekoni, ziphekwe zanqunyulwa (malunga ne-1¼ yekomityi)
6. 1 ithisipuni yetyuwa
7. ½ icephe lepepile
8. 1½ iitispuni ikumin
9. ¼ ikomityi cilantro, inqunyulwe
10. ¾ ikomityi yeturkey okanye umhluzi wenkukhu
11. 2 amaqanda
12. 1 ikomityi ecandiweyo ipepile jack samasi
1. Nyibilikisa ibhotela kwi-skillet enkulu phezu kobushushu obuphakathi. Yongeza i-celery edayiweyo kunye nepepper ye-jalapeno kwaye upheke de ithambe.
2. Tshisa izilayidi ngokwemiyalelo yephakheji. Sika kwiikota.
3. Kwisitya esikhulu sokuxuba okanye i-pan, xuba i-Sliders ezinekota kunye ne-bacon eqoshiwe, ityuwa, i-pepper kunye ne-cumin. Hlanganisa kwi-cilantro kunye nemifuno evela kwi-skillet. Ukuba upheka i-stuffing kwi-turkey, yongeza i-pepper jack cheese apha, ngokunjalo.
4. Kwisitya esincinci, xuba umhluzi kunye namaqanda. Galela phezu komxube wokugxumeka kwaye ugxobhoze de usasazwe ngokulinganayo.
5. Beka umxube wokugxumeka kwisitya sokubhaka se-9 × 13 kunye nephezulu nge-pepper jack cheese.
6. Bhaka kwii-350 degrees ze-30 imizuzu efihliweyo. Emva koko utyhile kwaye uqhubeke nokupheka kude kube nsundu phezulu, malunga nemizuzu eyi-15 ukuya kwe-20 ngaphezulu.
I-White Castle®Iresiphi yokuQinisa isilayidi yoqobo
Ixesha lokulungiselela: imizuzu emi-5 ukuya kwe-10
Ixesha lokupheka: imizuzu ye-35
Ukukhonza: malunga ne-9 iikomityi zokuxutywa (ezanele i-10- ukuya kwi-12-pound turkey)
1. I-10 ukuya kwi-12 White Castle Original Sliders, akukho pickles (ukusuka kwindawo yokutyela yaseCastle okanye umthengisi wendawo)
2. 1½ ikomityi edayiwe iseleri
3. 1¼ iitispuni ezicoliweyo ze thyme
4. 1½ iitispuni zesayiji egayiweyo
5. ¾ icephe lepepile emnyama egayiweyo
6. ¼ ikomityi yomhluzi wenkukhu (okanye ikomityi enye yecasserole version)
1. Qhawula iiSlayidi zibe ngamaqhekeza amancinci kwaye uwafake kwisitya esikhulu sokuxuba.
2. Yongeza i-celery edayiweyo kunye nezinongo.
3. Yongeza i¼ yekomityi yomhluzi wenkukhu kwaye uphose kakuhle.
4. Faka izinto kwi-turkey uze upheke ngendlela oqhele ukwenza ngayo.
5. Ukuba upheka ukugalela njenge-casserole, yongeza i-¾ yekomityi eyongezelelweyo yomhluzi wenkukhu kwaye uphose kakuhle.
6. Ukutshiza okanye ioli kwisitya se-2-quart casserole.
7. Dlulisa i-stuffing kwisitya se-casserole kwaye ubhake kwi-350 degrees imizuzu engama-35.
I-White Castle® Ayinakwenzeka™ iStuffing yesilayidi
Iinkonzo: malunga neekomityi ezili-9 zokugalela
1. 10 White Castle® Impossible™ Izilayida, akukho pickles
6. 1 indebe yemifuno yemifuno
1. krazula i-Impossible™ Izilayidi zibe ngamaqhekeza alingana nokuluma kwaye uwafake kwisitya esikhulu sokuxuba.
3. Yongeza i-1 indebe yomhluzi wemifuno kwaye udibanise kakuhle; vumela izithako zihlale imizuzu eyi-10 ukuze zifunxe.
4. Ukutshiza okanye ioli kwisitya se-2-quart casserole.
5. Dlulisa i-stuffing kwisitya se-casserole kwaye ubhake kwi-350 degrees imizuzu engama-35.